Musande Judha Thaddeus «Munamato» ron ron Mutariri wezvinokanganisa Zvinokonzera
Pasina mubvunzo kuziva kubvunza sei chimwe chinhu kubva kuSan Judas Tadeo Izvo zvakakosha kuti utange waziva zvimwe chokwadi nezve hupenyu hweuyo akazove mumwe weavo vanodikanwa Vaapositora muBhaibheri.
Kwete pasina, munamato kuminamato yake yekuda, kumatambudziko ekupererwa uye nekushanda, unoshanda sekunyaradza kunhamba yake inoramba ichikura yevakatendeka. Anokudzwa, akarurama uye ane mutsa murume uyo nzizi dzeingi dzakadirwa.
San Judas Tadeo haasi iye oga mutsvene anobvunzwa mumamiriro ekushomeka, kune vamwe vazhinji. Kana iwe uchida kuziva kuti nei izvi zviyero zvechechi zvichinamatwa, unogona kuwana rumwe ruzivo.
1 Ndiani San San Tadeo
2 Raive sei basa ra "El Trinomio"
3 Ndeapi mashura anoita mutungamiriri wezvisingagone kukonzera
4 Nzira yekunamata kuna Saint Judies
4.1 Munamato kuna Musande Judha Thaddeus wezviitiko zvakaoma uye zvakaomarara (munamato wechiKaturike)
4.2 Vhidhiyo nemunamato kuna Saint Jude Thaddeus yechishamiso chisingaiti:
Ndiani San San Tadeo
Vazhinji vanhu vanonamata kwaari asi vashoma chaizvo vanoziva kuti Judas Tadeo ndiani. Unogona kushamisika nenyaya yekuti watiri kubata naye aive mumwe wevadzidzi vaJesu weNazareta uyo muEvhangeri akadaidzwa kuti munin'ina waJesu, kungoti Tadeo kana Judas de Santiago. Izvi zvakazvarwa munzvimbo yemuganhu pakati peAsia neEurope. Mamiriro akafanana eSan Chárbel, ayo iwe aunogona kuziva zvese zvirimo https://descubrir.online/, San Cipriano, kwaunogona Verenga zvimweuye Mutsvene Pancratius.
Sokunge kuti aya ese mazita aive mashoma, San Jerónimo de Estridón akaidaidza "El Trinomio", ndokuti, "nemazita matatu" Rangarira kuti zita rekuti Judhasi rinoreva "kurumbidzwa kunopihwa Mwari" uyezve anonzi "San Juditas Tadeo."
Uyu mutsvene aive nehukama naJesu Kristu nekuda kwehukama hwake neSan Joaquín naSanta Ana, vabereki veMhandara Maria. Baba vake vainzi Cleopas naamai vake Maria, namesake uye hama yepedyo yamai vaJesu. Nekudaro, aive muzukuru-mukuru waJosé naMaría uye, nekudaro, hama yaJesu Kristu. Mumwe wevakoma vake aive Santiago Mudiki.
Shamwari yaJesu panguva yehudiki nehudiki hwake, apo wekupedzisira paakatanga hupenyu hwepaguru, Thaddeus, uyo akatanga kudaidzwa nenzira iyoyo kuti amusiyanise naJudhasi Iskarioti, akasiya zvese kuti amutevere.
Sechido, tinoda kunongedzera kuti kana Jesu Kristu, mushure meKudya Kwemanheru Kwekupedzisira, avimbisa kuti achazviratidza kune avo vaizomuteerera, Judhasi weSantiago akamubvunza kuti sei asina kuzviratidza kune wese munhu, sechiratidzo chekushushikana kukuru kwakaratidza musande uyu . Kristu akapindura kuti zvese Baba vake uye Aizoshanyira avo vese vaiMuda. "Tichauya kwaari tigare maari." (Johani, 14, 22-23).
Raive sei basa ra "El Trinomio"
Murwere uye akachengetedzwa agronomist, uyo angadai akazvarwa muKana yeGarirea, akasiya basa rake ku kubatana nevadzidzi vaMesiya, kuva kwete chete weaTenzi vaApostora asiwo zvakare mukuru uye anoshingaira muparidzi wedzidziso yake.
Matunhu eGarirea, Judhiya, Egypt, Asia, Yufratesi, Tigirisi, Samariya, Ribhiya, Edessa ne Bhabhironi, ndidzo dzaive dzimwe dzenzvimbo dzakakosheswa uko Thaddeus akaendesa meseji yemesia, iyo yakazogumira munzvimbo dzePersia neSyria.
Kuparadzirwa kwemeseji iyi kwaisave kungarondedzerwe nerunyararo, sezvo zvaipfuura nenzvimbo dzambotaurwa vakatambudzwa zvine utsinye. Zvisinei, hapana nguva apo dzvinyiriro yakadaro yakakwanisa kumuita kuti asiye nhamburiko dzake. Uyezve, hunhu hwake hwakawedzera uye, nekuda kwehunhu hwake, vanhu vakashandurwa christianity nemazana, kusanganisira Mambo Ababhi weBhabhironi.
Achiperekedzwa nemunin'ina wake Simon, akafamba nemumigwagwa isingaverengeke, achisvika kuPersia, nzvimbo inozivikanwa nekurwisa zvine mutsindo tsika nehunhu hwechiKristu. Hazvirambiki kukodzera kwake chinja mazana ezviuru vagari venzvimbo ine ruvengo yakadaro, vachiparidza nekugadzirisa zvakaipa zvavo nezvikanganiso, vachivabhabhatidza, kuvasimbisa nekuvaroora.
Zviito zvavo zvakakonzera vanamati vezvidhori vakazvidzwa, vakashungurudzika nekurasikirwa nekuvimbika kwavo, kuti vafambire mberi parwendo rwavo rwekuenda kuguta rinotevera, Suamir, uko kwavakaisa chepfu munzeve dzevanhu nenhau dzenhema nezve kuuya kunotevera kwa vatorwa vaviri avo vaizotongerwa rufu, nekuti ivo vaibvisa kunamatwa kwavamwari.
Pakasvika vese Vaapositori, vakagamuchirwa nemisodzi yakaipa, vakabatwa uye vakabatwa zvisina tsitsi, vachivatungamira kutembere yakagadzirirwa kunamatwa kweZuva uye la Luna. Vakasiiwa munzvimbo tsvene uye vakasungwa nengetani kusvika kwaedza zuva raitevera, pavakatongerwa rufu, Simón anonzi akaurayiwa nemarlet mumusoro kana kutemwa nepakati nesaha.
Zvinotaridza kuti, vachiri kushungurudzwa, Thaddeus akakwanisa kutarisa mumaziso aSimoni achiti "Hama, ndinoona Ishe wedu Jesu Kristu achitidaidza", Izvi zvakakonzera kumwe kumuka kwekurohwa pamitumbi yaive neropa yevaApostora.
Kana zvakadaro mafiro akaita San Judas Tadeo, mhinduro ndeyekuti akagurwa musoro nedemo, ndosaka mufananidzo wake dzimwe nguva uchiratidzwa neimwe yeaya maturusi ari muruoko.
Ndeapi mashura anoita mutungamiriri wezvisingagone kukonzera
Thaddeus anozivikanwa zvakare se "mutariri wezvisingaite zvikonzero", nekuti iye asinganzwisisike Saint Brígida akanyora kuti Jesu akakurudzira rimwe zuva kuti pese paanoda kuwana zvimwe zvakanaka, anofanira kuzvikumbira kuburikidza nemusande ari kubvunzwa. Nechikonzero ichi, inogoverana patronage yakadaro neSaint Rita de Casia.
Mukurumbira wake wechishamiso unomutangira, kusvika padanho rekuiisa panhongonya yekufarirwa nevasande, ichipembererwa pazuva reSan Judas Tadeo muna Gumiguru 28. Kuzvipira kwake muhupenyu kunomubvumidza seanodzikisira uye ane rudo nevose avo vakamukumbira kuti avape chishamiso.
Akatumidzwa zita raJesu sa "Murapi", Achiziva iye ane tsitsi, ane rudo hunhu uye anogara achida kubata zvisingaite kana kurasikirwa zvikonzero, kubvira ipapo akanamatirwa uye nekupihwa kupihwa kwaari.
Zvake kuporesa mashura yevanhu vanorwara zvikuru kana vasina tariro vakafamba nenyika. Kwave kuriwo protagonist mune tsaona idzo mune mumwe munhu anonzi akashaikwa.
Kunyanya, kureverera kwake kwakasimbiswa mune akasiyana manenji ezvikamu zvekurapa zvine resolution yakashamisa zvikwata zvekurapa zvakapindira mazviri, zvikasawana tsananguro yesainzi yezvekubatsira.
Saizvozvowo, rudo ndiyo injini uye kudzikama kwevanhu vazhinji vanogara nechinangwa chekuda vamwe. Mutsvene Judha ndizvo murevereri akasarudzika mukumisikidza kubatana kwaMwari pakati pezvisikwa zviviri uye zvimwezve. Unogona kuenda kwaari zvese kuti udzore rudo rwakarasika mumhuri, mune vaviri vacho kana kuti pakupedzisira usangane nemunhu iyeye waanoshuvira uye ari nyore.
Kunyangwe zvichiratidzika kuti musande uyu haana kunzi kukosha kwazvinofanira kuita munyaya dzerudo, kune akawanda manenji akaitwa naye muzita remwoyo.
Nzira yekunamata kuna Saint Judies
Nzira chaiyo yekubvunza uyu mutsvene izvo zvinodikanwa ndeyekunyengetera. Uyo ane matambudziko akaoma uye akapererwa anogona kubatsira uye kukutungamira munguva dzako dzakaoma kwazvo uye zvinomuka kubva pane zvakaratidzwa kare kuna Santa Brígida.
Munamato kuna Musande Judha Thaddeus wezviitiko zvakaoma uye zvakaomarara (munamato wechiKaturike)
“Musande Judha Thaddeus, mupostori uye mutariri wematambudziko akaomarara,
Chiedza chako chinopenya uye chinopenya paaritari,
Kuvepo kwako kunoshamisa uye kwemweya,
Iwe unosvika pamwoyo yakatambudzika uye nekuvapa rugare rwepfungwa,
Iwe haurambidze vanamati vako nyasha kana chikumbiro,
Ruvengo rwenyu rutsvene inzwai kuchema kwedu.
Ndinokumbira kuvapo kwako panguva ino,
Nhasi ndinonzwa kupererwa uye ndazara neshungu,
Ndinokumbira kuti uterere kufona uku,
Mauri ndimo mandinogona kutendeuka,
Moyo wangu unobvunda uye ndinonzwa uchirova
Rima rinodzora mweya wangu,
Uye kurwadziwa kwangu kunondishungurudza
Ndinzwirei tsitsi, ndinzwirei tsitsi
Iwe wakafamba naJesu nzira dzekurwadziwa,
Iwe wakatakura kuparidzwa kweshoko rake mumuromo mako,
Iwe wakadzidzisa mwenje usinganete wemweya,
Uye usingakahadzike gwai rega rega muboka iwe waisa,
Makaponesa asiri iwo
Yekufamba pamabwe emabwe,
Nematombo echivi uye nerima chairo,
Kuvatungamira munzira kwayo,
Nzira yekudenga neyamwari.
Kukumbira kwangu ngakuuye kwaari,
Kubvira nhasi ndazvizivisa ndiri mushumiri wenyu akatendeka,
Uye chero kwandinoenda ndichaparadzira kuzvipira kwako,
Ndichataura pamusoro penyasha dzaunondipa nhasi,
Kuita kuti zvive zvakajeka kune wese munhu,
Kutenda kwangu mauri hakuna kunyadziswa,
Ndinovimba netariro mamuri
Munamato uyu watungamira mukuzadzikiswa kwe novena kuna Mutsvene Judha Thaddeus nevanozvipira, vachiratidza kutenda kwavo kwakasimba maari. Nenzira imwecheteyo, kune minamato yakasiyana siyana yeSan Juditas umo kupindira kwake kwaMwari kunokumbirwa pamberi paKristu, pakati payo pane:
Munamato webasa. Imwe yeanonyanya kushandiswa pakati pevaKristu uye vatendi, anoshandiswa nechero munhu anoronga kupa kugadzikana kwehupfumi kumhuri yavo
Munamato werudo uye kuporesa. Mumwe munamato une simba unoshanda segwara mumamiriro ezvinhu akaomarara muhupenyu kana kana nyaya dzeshungu dzichiisa musoro wakakomba
Vhidhiyo nemunamato kuna Saint Jude Thaddeus yechishamiso chisingaiti: